Imibala yePomeranian: Uhlu Oluqedile Layo Yonke Imibala Yengubo Eyaziwayo eyi-13 - Okufakiwe
AmaPomeranians yisilwane esiphelele sabahlali bedolobha ngobukhulu babo obuncane nobuntu obuthandekayo.
Baziwa kakhulu ngemvelo yabo enempilo nangamajazi amahle athokomele.
Kodwa-ke, bewazi ukuthi ijazi eliphindwe kabili lePomeranian elingena ngemibala ehlukene eyi-10 +?
Kukhona empeleni Imibala e-13 ehlukile yePomeranian lokho kusuka kukhilimu ophaphathekile kuya ekuhlanganiseni.
Mhlawumbe uzothandana nejazi labo elidumile lewolintshi noma mhlawumbe uzothanda i- iphethini ye-brindle engavamile?
Ishadi lemibala yePomeranian
1. I-Orange Pomeranian
2. IPomeranian ebomvu
3. IPomeranian emhlophe
4. IBlack Pomeranian
5. UMerle Pomeranian
6. Impisi Sable Pomeranian
7. Pomeranian Chocolate
8. IBlue Pomeranian
11. IBlack & Tan Pomeranian
12. IBeaver Pomeranian
13. IPomeranian enemibala emithathu
Ukukhetha Umbala: Okufanele Ukwazi
Bangu Imibala engu-13 ehlukile yamajazi asePomeranian konke kwaziwa yi I-American Kennel Club .
Eminye imibala efana ne-beaver ne-brindle iyivelakancane kuneyendabuko ebomvu, e-orenji, emhlophe nomnyama. Ungabona uhlu oluphelele lwayo yonke imibala yejazi etafuleni elingezansi:
iwolintshi I-orenji ekhanyayo engenamaki amnyama. I-Gradient yokukhanya kwemibala ewolintshi emnyama. 1
Inethi Umbala obovu obomvu ojijile onoboya obukhanyayo obukhanyayo esifubeni sabo. 2
Mhlophe Okumhlophe okumsulwa okungenawo ukhilimu noma ukumakwa okunemibala emnyama. 3
Mnyama Umbala omnyama oqinile. 4
UMerle Ukusakazwa kobomvu ngokumelene nesisekelo se-tan ngeziqeshana ezimhlophe. 5
Impisi Sable Uboya obumpunga ngamakhala amnyama, amarimu wamehlo, izindebe, namaphakethe wezidladla. 6
Ushokoledi Ububanzi ngombala kusuka obisini kuya kushokholethi omnyama. 7
Okuhlaza okwesibhakabhaka Izinwele zokuqapha ezimpunga nezimpunga ezimnyama. 8
Ukhilimu Uboya obumhlophe njengekhekheba lezinyosi. 9
Brindle Imishwe ngemibala ebomvu, yegolide, e-orenji nomnyama. 10
Okumnyama nethani I-Fluffy enoboya obumnyama ebusweni nasemhlane futhi ine-tan esifubeni, nasemilenzeni. ishumi nanye
IBeverver Umbala onsundu okhanyayo okhumbuza ikhukhi eliphaphathekile. 12
Abamhlophe Ukufaniswa okumnyama, okumnyama nokumhlophe. 13
I-Orange ngumbala wendabuko wasePomeranian.
Lapho abathandi bezinja becabanga ngalolu hlobo bacabanga i-orange.
Abazalisi babiza i-orange Pomeranian ecacile i-orange ukuhlukanisa phakathi kwalo mbala kanye nesable orange.
Lo mbala ukhuliswa ngokukhwelana i i-orange Pomeranian ngosable othwala isakhi sofuzo esicacile.
Lawa maPomeranians avame ukuphaphatheka njengemidlwane. Kuyintokozo ukuyibuka ivuthwa futhi ibone ukushintsha kombala kusuka kokumhlophe okakhilimu okhanyayo kuye kolintshi ogqamile. Kwesinye isikhathi le midlwane iba nejazi le-sable eliphelela ku-orenji ocacile futhi.
Bajwayele ukuntula uboya obumnyama nomdlalo umbala okhanyayo okhanyayo nge-gradient yokukhanya ngemibala e-orenji emnyama.
Ama-Orange Pomeranians kulula ukuwathola futhi abonwa njengombala owamukelekayo ezingeni lawo lokuzala.
Ubomvu ngomunye wemibala ethandwa kakhulu yiPomeranian - owesibili kuye kowolintshi kuphela.
Ijazi elibomvu likaPomeranian ngu umthunzi ogqamile obomvu obomvu okhilimu okhanyayo uboya esifubeni sabo. Kuvame ukudideka ne-orange engabonakali.
Okubomvu kungenye yemibala eminingi engakhonjiswa eringini. Ziyafana ngokwezakhi zofuzo kumaPomeranians amnyama ngoba womabili amajazi kuthiwa atholakala kuhlobo lwe-E Locus.
Okubomvu ne-orange kuphakathi kwemibala emibili ethandwa kakhulu.
IPomeranian emhlophe ngu okumhlophe okumhlophe okungenawo ukhilimu noma ukumakwa okunombala omnyama .
Uma uthanda ukubukeka kwenja eyi-Samoyed kepha ufuna uhlobo oluncane le pooch emhlophe iphelele!
Zizalwa zimhlophe njengemidlwane futhi uhlala lo mbala kukho konke ukuphila kwabo.
AmaPomeranians amhlophe amhlophe ngenxa yokushoda kwe-pigment. Abanayo i- i-pigment emnyama ye-melanin ( okungukuthi i-eumelanin emnyama ) izinja ezinazo. Ukushoda kombala yilokho okunikeza izilwane ezingama-albino amehlo abomvu noma amakhala abomvana. Kodwa-ke iPomeranian emhlophe akuyona i-albino ngoba amehlo ayo namakhala kumnyama.
Le nja ejabulisayo enjengefu ilungele noma ngubani ophupha ngokuba nesilwane esifudumele futhi adinga ukunakekelwa, ukuzivocavoca umzimba kanye nokudla okunempilo njenganoma imuphi omunye umbala wePomeranian.
Lokhu Pomeranian kuyinto umbala omnyama oqinile othandekayo .
Baziwa abalandeli njengesidalwa sobumnyama basenomoya wesiginesha osayinayo esiwuthandayo ngalolu hlobo.
Umbala omnyama ukhiqizwa yi-E Locus allele gene ekhulisa ukukhiqizwa kwe-pigment emnyama futhi kuholele ku-a Pomeranian omnyama oqinile.
Qaphela lapho ukhipha iPomeranian emnyama ngaphandle njengoba ukukhanya kwelanga kukhipha kancane uboya babo futhi kuholele engutsheni ebomvu nsundu.
Lo mbala uphelele kumuntu othanda ukugqoka izingubo ezimnyama njengoba ukuchitha uboya kuzohlala kufihliwe!
IMerle iyiphethini enhle yemibala ngoba ubuntofontofo bejazi likaPomeranian bubonisa i- ukufafaza okubomvu ngokumelene ne-tan base ngeziqeshana ezimhlophe . Lo mbala ufana kakhulu nenja yezinkomo yase-Australia.
Zivame ukubonwa ngephethini eluhlaza okwesibhakabhaka noma ebomvu.
Amakhala kanye nezidladla zawo kuvame ukuba nemibala emnyama enombala opinki nomnyama futhi amehlo awo angahluka noma kuphi ngombala kusuka kokumnyama nsundu kuya kokuluhlaza okwesibhakabhaka.
Leli phethini likhuliswa ngokuhlanganisa umzali ohlangane nePomeranian emnyama noma ushokoledi.
Qiniseka ukuthi umfuyi wakho uyaziqonda izingozi ezihambisana nokuzalanisa izinja ze-merle. Ukuhlangana kabili kungaba kakhulu bangenwa yisithulu noma ubumpumputhe. Lokhu kungenxa yokuthi isakhi sofuzo esiphindwe kabili sicindezela amaseli athile e-pigment ku-iris ne-cochlea.
Lo mbala uzokhipha wonke umuntu epaki yezinja futhi uphelele kunoma ngubani ofuna ukubonwa kombala esilwaneni sakhe.
Impisi sable Pomeranian kwesinye isikhathi yaziwa njenge-gable sable ngoba ibukeka ifana kakhulu nempunga kepha inezinwele zokugada ezinamachopho amnyama.
Lokhu kuhluka kombala ompunga kunombala we-sable obanikeza ikhala elimnyama, amarimu wamehlo, izindebe, namaphakethe e-paw.
Izingxenye ezimnyama kakhulu kuvame ukuba ubuso, emuva nesifuba.
UWolf Sable unjalo omunye wemibala engajwayelekile yePomeranian futhi eziningi azikhonjwanga ngendlela efanelekile njengezimbali eziwolintshi. Kunzima ngokumangazayo ukuthola impisi yasePomeranian eyi-purebred wable yize eyokuqala ikhonjiswe ngo-1901.
Ukuphela kwendlela yokuqiniseka ukuthi umdlwane wakho yiWolf Sable ukuhlolwa kofuzo lombala .
Azikho izingqinamba zezempilo ezaziwayo eziqondene nombala wayo, kepha ngenxa yokutholakala kwazo zibiza kakhulu futhi zingabiza u- $ 2,000.
Ushokoledi uPomeranian uvame ukufana nebhere eliphilayo!
Izinja ze-Chocolate Pomeranian zingakwazi ububanzi bombala kusuka ebisi kuya kushokoledi omnyama namaphakethe abo emakhaleni nasezidladleni ngokuvamile anombala onsundu ofanayo osilika.
Umbala kashokolethi noma wesibindi ubangelwa ufuzo lwe-B Locus oludala umbala omnyama owenza mnyama ijazi lenja. Ukuguqulwa kuguqula le ngulube futhi kuholele kumajazi anombala kashokoledi.
Njengezinja eziningi ezinoboya obumnyama zenza kahle kakhulu lapho zigcinwa ngaphandle elangeni isikhathi eside. Ukukhanya kwelanga kuzobubomvu ubomvu futhi kwenze kube nzima ukubona umbala kashokoledi.
Le nja yenza ukukhetha okuhle kunoma yimuphi umnikazi ofuna ibhere elihamba ngezinyawo .
Uma iPomeranian emhlophe iyifu elihambayo lapho okuluhlaza okwesibhakabhaka kuyifu lesiphepho.
Le Pomeranian izalwa isimpunga esiliva futhi ine- izinwele ezimnyama zokugada ezimnyama ezinezikhindi eziluhlaza okwesibhakabhaka .
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka waziwa yi-American Kennel Club futhi kulula ukuyithanda.
Ama-Blues akhuliswe kubazali ababili abanemibala eqinile abaphethe isakhi sofuzo esihlanjululwayo.
Kunezinkinga zezempilo ezihlotshaniswa nanoma iyiphi inja eluhlaza okwesibhakabhaka ngoba zinethuba lokuhlanjululwa kwe-alopecia okuholela ekulahlekelweni izinwele nasezikhunjeni ezomile.
Uma kuthengwa kumfuyi ohloniphekile onombala oluhlaza okwesibhakabhaka amaPomeranians enza umngane omuhle.
Ukhilimu uPomeranian uyinja enhle enayo uboya obuphaphathekile obukeka njengoju lwezinyosi .
Le nja enemibala ekhilimu ivame ukuzalwa imhlophe kepha ijazi layo limnyama ngombala ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ukhilimu.
Esinye sezakhi zofuzo ezibandakanyekile ekukhiqizeni umbala kakhilimu yi-E Locus gene enikeza iPomeranian ebomvu umbala wayo futhi.
Lokhu kuhlukahluka kombala kudinga ukuzilungisa okuningi njengoba uboya babo bungavela kalula ezingutsheni.
Izinja ezinephethini ye-Brindle ezimthende ngemibala ebomvu, yegolide, ewolintshi nomnyama.
Ijazi elide likaPomeranian lisebenza njengendwangu yezingqimba zamathoni womhlaba.
I-Brindle ingaphezulu kwephethini kunombala oholela emigqeni emnyama. Amaphuzu amnyama kakhulu kuvame ukuba yizidladla, izindlebe, isifonyo kanye emuva.
Ezinye zinombala ompunga ngaphezulu kanti ezinye zinombala onsundu.
Iphethini ye-brindling ibangelwa uhlobo “olweqile” lwe-E Locus .
Yonke i-brindle ibukeka yehlukile kwenye, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi uthola inja ebukeka ngokuhlukile.
I-Pomeranian emnyama ne-tan iyinhlobonhlobo yombala edlala iphethini emnyama ne-tan. Kunjalo Fluffy ngoboya obumnyama ebusweni nasemhlane futhi bane-tan esifubeni sabo, nasemilenzeni.
Ukugqamisa kwe-Tan kugcizelela amashiya amachashazi wesiginesha yalolu hlobo futhi kubanikeze ukubukeka okuhle nokuthandekayo. Abaningi banezimpawu zamachashazi ezithandekayo ngaphezulu kwamehlo abo okusikhumbuza amashiya.
Okuthandekayo futhi okunesibindi kuyindlela engcono yokuchaza lo mbala.
Ziyafana kakhulu kwezofuzo kumaPomeranians anemibala ehlelekile njengoba abelana ngokulinganayo okufanayo.
AmaPomeranians amnyama noshukela ahlukile futhi abukeka njengeRottweiler encane noma uDoberman Pinscher.
Noma ngubani othanda ukubukeka kwalezo zinhlobo kepha angathanda ukuba nenja efulethini angayithanda le nja.
IBeaver Pomeranian ingumbala onsundu okhanyayo okhumbuza ikhukhi eliphaphathekile. Babejwayele ukubizwa ngama bhisikidi.
Le nja inamehlo ansundu futhi ijazi elinsundu ngokuphelele ngombala okhilimu okhanyayo esifubeni nasentanyeni. Ziza ngezinhlobonhlobo zemibala kusuka konsundu kuya ku-beige.
Ijazi likashokoleti elihlanjululwa yi-beaver ngiyabonga ukuncibilikisa ukuguqulwa kwezakhi zofuzo .
NjengePomeranian eluhlaza okwesibhakabhaka lo mbala ohlanjululwayo ungadala umbala wokuhlanjululwa kwe-alopecia. Lesi yisimo sezakhi zofuzo esiholela ekulahlekelweni izinwele nasekunweleni isikhumba esomile.
Qiniseka ukuthi ubuza umfuyi wakho ukuthi ngabe bahlolile yini isitoko sabo sokuzalela i-color dilution alopecia.
IPomeranian enombala ophindwe kathathu iyafana nomnyama nomnyama ngaphandle kwale nja ifaka ukwengezwa komhlophe.
Baziwa kakhulu nge Ukufaniswa okumnyama, okumnyama nokumhlophe.
Lo mbala ungabonakala ngezindlela ezahlukahlukene ezahlukahlukene:
Amanye ikakhulukazi amhlophe.
Ezinye ikakhulu zimnyama.
Ezinye ziyinhlanganisela yazo zontathu.
Okuhlala kubonakala kuvela kulo mbala amashiya amabili amachashaza e-tan abanika ukubonakaliswa okuqinile.
Njengoba yonke imidlalo yejazi elinemibala emithathu inesilinganiso esihlukile somnyama, onsundu nomhlophe, noma ngubani okhetha lokhu kuhlukahluka uyohlala enenja eyingqayizivele. Ziphelele kunoma ngubani ongafuni ukuhlala kumbala owodwa!
Uma kukhulunywa ngemibala ye-pomeranian kunomthunzi ohlukile wazo zonke izinhlobo zabantu.
Imibala eminingi kulolu hlu (isb. Obomvu, owolintshi, ushokoledi) iphilile kakhulu. Noma kunjalo, kufanele wazi ifayela le- ukukhathazeka kwezempilo ngemibala ehlanjululwe (isb. blue and beaver). Imibala ehlanjululwayo ihlotshaniswa ne-alopecia, ukulahleka kwezinwele nesikhumba esomile.
Kakhulu cwaninga noma yibaphi abalimi Wokuhlangana kwamaPomeranians.
Uma umfuyi ethengisa imidlwane ephindwe kabili ( okungukuthi bobabili abazali bajabule ) bese ubagwema. Le midlwane kungenzeka ibe nezinkinga zokuzwa nokubukwayo.
Kufanele ulindele ukuthola umehluko wamanani amancane ngombala ngamunye. AmaPomeranians anemibala yendabuko athengiswa phakathi kuka- $ 1,000 kuya ku- $ 1,500. Imibala egqamile efana nomnyama, brindle, omhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka ivame ukubiza kakhulu ku- $ 1,500 kuya ku- $ 2,000.
Ungahle Uthande: Umhlahlandlela weMicro Pomeranian: Amaqiniso ama-5 Okufanele Afundwe
AmaPomeranians yizinja ezincane ezithandekayo, ezinhle futhi ezenza ukukhetha okuhle kubanikazi bokuqala.
Kulolu hlu sabelane nawe ngayo yonke imibala engu-13 eyaziwayo namaphethini wejazi - kepha lokhu kuyisiqalo nje seqhwa.
Uma ucabanga ukuthi lolu wuhlobo olulungele wena, zama ukuthola abalimi bendawo abazalela imibala ethile. Izinhlobo zazo ezinkulu zemibala zenza ukuthi kutholakale umdlwane kangcono kakhulu.
Imuphi umbala owawuthanda kakhulu? Sazise kumazwana angezansi.
malini i-rhodesian ridgeback
amagama ezinja we-pitbull wesilisa
inja iyaganga kepha ayihlanza
ungazinikeza izinja ikhabe
alala malini imidlwane enamasonto ayisithupha